देउवालाई छोड्न भन्ने तर निकास नखोज्ने कम्युनिष्ट गठबन्धन, कम्युनिष्टले जित्दा विधि चाहिँदैन कमरेड ?
बाबु नेपाली, प्रकाशित मिति : २०७४ पौष १७ सोमबार , ६,०८७ पटक हेरिएको
मुलुकले पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरेको छ । केन्द्रीय बाहेक सात वटा प्रदेश सरकार बन्नुछ। के केन्द्रमा छाडेर मात्रै पुग्ने हो वा प्रदेश पनि चाहिने हो ? यसको पनि विधि हुन्छ होला नि ! कि कम्युनिष्टले जितेपछि विधि नचाहिने हो कमरेड ? के एमाले र माओवादी बाहेकले कहीं कतै जितेकै छैनन् ?